Nhau - Gamuchirai vese vatengi vakanaka vanotaura nezve mhinduro uye Kuyera Pipette mazano nesu !!
Gamuchirai vese vakanaka vatengi tauriranai mhinduro dzemhinduro uye Kuyera Pipette mazano nesu !!
Hazvina mhosva mutengi mutsva kana mutana akura, Tinotenda mumutsara wakareba uye hukama hwakavimbika hweIOS Chitupa China Lab Inoshanduka Vhoriyamu Pipette, Yakanaka mhando yakanaka, kukwikwidza mutengo, kukurumidza kuendesa uye anovimbika mupi anovimbiswa Nomutsa tizivise yako yakawanda chinodiwa pasi pehukuru hwese chikamu kuitira kuti tikwanise kukuzivisa iwe nenzira kwayo.
Yakagadziriswa mirairo inogamuchirwa. Bhizimusi chairo ndere kuwana kuhwina-kuhwina mamiriro, kana zvichibvira, tinoda kuendesa imwe rutsigiro rwevatengi. Gamuchirai vese vakanaka vatengi tauriranai mhinduro dzemhinduro uye mazano nesu !!
Kunamatira kune chirevo che "Super Yakakwira-mhando, Inogutsa sevhisi", Isu tanga tichivavarira kuve wakanaka bhizimusi mudiwa wako weFekitori kugadzira China Bvisa Girazi vakapedza pipettes kuyerwa, Isu tinogara tichingogamuchira vatengi vatsva nevakuru vanotipa ruzivo rwakakosha uye zvikumbiro zvekushandira pamwe, ngativakei tigadzikane pamwe chete, uyezve titungamire kunharaunda yedu nevashandi!
Fekitori inogadzira China girazi kuyera pipette, Tinotenda kuti hukama hwakanaka hwebhizinesi hunotungamira mukubatsirana pamwe nekuvandudzwa kwemativi ese. Isu tave nekugadzira hukama hurefu uye hunobudirira hwekudyidzana nevatengi vazhinji kuburikidza nekuvimba kwavo mumasevhisi edu akasarudzika uye kuvimbika mukuita bhizinesi. Isuwo tinonakidzwa nemukurumbira wepamusoro kuburikidza nekuita kwedu kwakanaka. Kuita kuri nani kungangotarisirwa seyakavimbika pedu. Kuzvipira uye Kugadzikana kunoramba kuripo sezvakamboita.
Kuyera Pipette, Kirasi A, Grainopesana ne zero kumusoro
kupedza kudzidza (ml)
Kuyerera rate (s)